Ixtiraamidda Xoriyadda Warbaahinta
Warbaahin xor ah oo madaxbanaan waxa ay dowladaha kula xisaabtamaan masuuliyadooda., waxa ay daaha ka rogaan six un u adeegsiga awooda iyo musuq-maasuqa waxa ay gacan ka geysataa xaqiijinta in dadweynuhu helaan xogaha dhabta ah. Wadamo badan oo dunida ah wariyayaashu waxay wajahayaan rabshado, iyo xarig loogu geystos haqadooda wardoon darted.
Iyadoo la aqoonsanayo muhiimada shaqada wraiyayaasha qabtaan iyadoo loo maraayo xoriyada hadalka sanadkan abaalmarinta Nopel Peace Priceka waxaa la siiyey laba wariye oo kala ah Maria Ressa oo u dhalatey dalka Philippines iyo Dmitry Muratov oo u dhashey dalka Ruushka.
Madaxweyne joe Biden ayaa qoraal uu maamuusaayey wariyayaasha ku guuleystey abaalmarintan waxa uu yiri “sida wariyayaal badan oo dunida kala jooga Ressa iyo Muratov waxa ay dabagaleen xaqiiqda iyagoo aanan daaleyn cabsanynina. Waxay ka shaqeeyeen in ay hubiyaan awoodaha sida xun loo adeegsado, waxay soo bandhigeen musuqmaasuqa waxayna dalbadeen daahfurnaan, waxay si adag ugu istaageen helitaanka warbaahin madaxbanaan iyagoo iska difaacay xoogagaii doonaayey in ay aamusiyaan.”
Ressa iyo Muratov, sida wariyayaal badan waxay qiima badan ku bixiyeen go,aankooda ah in ay raadiyaan runta waxaa lala beegsadey hanjabaadyo joogto ah, xadgudubyo iyo cabsigelin iyo eedo been abuur ah oo dhinaca sharciga ah, iyadoo Muratovna la qaar ka mida dadkii la shaqeynaayey.
Mareykanku waxay canbaareynayaan hanjabaadyada, xadgudubyada iyo rabshadaha wariyayaasha iyo shaqaalaha wrabaahinta lala beegsanaayo, hanjabaadyadan soo kordhaaya ayaa waxay ka imaanayaan dowladaha kuwaasoo ka gudbaya xuduudahooda, iyagoo u adeegsanaaya six un u adeegsiga basaasida technolojiyada loo maro kaasoo la soconaya isagaarsiinta wariyayaasha iyo meelaha ay joogaan si loo xadido awooda wariyayaasha ay ku tabinayaan musuq maasuqa dowlada ama caburinta dadkeeda, waa inaanan loo hanjabin wariyayaasha , lagu xadgudbin toosna loo weerarin ama aanan loo xirin shaqaooda oo ay qabsadeen.
Afhayeenka wasaarada arrimaha dibada Mareykanka Ned Price ayaa yiri
“Hada si ka baahi abadan abid waa in aynu u istaagnaa oo aynu diidnaa weerarada sii kordhaya ee wariyayaasha tooska loogu qaadayo, xadgudubyada internetka, maxkamadeynta loogu hanjabayo iyo sharciyada lagu cadaadinaayo si loogu aamusiyo warbaahinta dunida.
Mareykanku waxay sii wadi doonaan in ay u ololeeyaan xoriyada hadalka iyadoo aanan la xadideynin iyo in lala xisaabtamo oo sharciga la horgeeyo kuwa weerara warbaahinta xorta ah.
Madaxweyne Biden ayaa yiri “Ressa, Muratov, iyo wariyayaasha guud ahaan caalamka waxay furinta hore kaga jiraan dagaalka dunidu ugu jirto helitaanka runta” waxaa kale oo uu intaas raaciyey “ Aniga iyo dad badan oo dunida ku nool waxaan ka abaal heynaa shaqada muhiimka ah ee ay hayaan wariyayaasha."